NgoFebruwari kusizisela isavenge sethoba sikaMariana de Marco | Uncwadi lwangoku
O Calle para Siempre: Ufakelo lwesithoba kuthotho lweMariana de Marco lubetha iivenkile ezithengisa iincwadi.
UJose María Guelbenzu uzakusizisa ngoFebruwari ukufakelwa kwethoba kuthotho lweenkqubela phambili kwijaji ephandayo uMariana de Marco.
Umbhali wenoveli, umgxeki kwezoncwadi kunye nomlawuli wangaphambili we-Alfaguara y Taurus, uJose María Guelbenzu, upapasha Okanye isitalato ngonaphakade, la inoveli yethoba ukusuka kuthotho lweenkwenkwezi Ijaji ephandayo uMariana de Marco.
Okanye iSitalato ngonaphakade yinoveli ebekwe emtshatweni phakathi kuka Ana Patricia, intombi ka usapho lweengcungcu kunye noIgnacio, unyana ka usomashishini ozenzele ngemvelaphi yasemaphandleni. Kungenzeka njani ukuba, ulwaphulo-mthetho lwenzeka emtshatweni. Ujaji Mariana de Marco uphakathi kweendwendwe. Inoveli phantse satirical malunga neeklasi zentlalo eziphakamileyo, "bazothini", apho kungabikho kunqongophala kweegusha ezimnyama, iibums ukusuka ekuzalweni, oosomashishini ababawayo kunye nazo zonke izinto ezifanele ukubonwa. Indawo emnandi kakhulu apho imbonakalo ibaluleke kakhulu.
1 Ngubani uMariana de Marco?
2 Uthotho lukaMarco lukaMariana:
3 Kude kube nini uMariana de Marco?
4 Umbhali: Jose María Guelbenzu
Ngubani uMariana de Marco?
UMariana de Marco Yiyo umgwebi wemfundo oza kwezomthetho emva kokuba ligqwetha eliphumeleleyo kwinkampani apho yena nomyeni wakhe babengamaqabane. Ngexesha loqhawulo-mtshato umyeni wakhe wamshiya ngaphandle kwaye kwafuneka aqale phantsi. Ukohlwaya ngoqeqesho, wasebenzisa ikharityhulamu yakhe ebalaseleyo ukufikelela kwezomthetho ngendlela yesithathu.
Kwezabo Amashumi amane into, UMariana unobukho obushiya kungekho mntu ungakhathaliyo: 1,75, inani lezemidlalo kunye nelizwi elinzulu. Inkulu amehlo amdaka, yenziwe ngu isiqingatha semane I-brunette ithoba i-a ukuzithemba nokujongela umngeni.
«Akukho mntu wayenokungabaza, ukumbona, ukuba wayengumntu wesimilo ongenalo thambo lokutya okumnandi; Ngulo mxube owamnika ikhubalo elikwisinye kuba wayengengomfazi oneempawu eziqhelekileyo okanye ezisesikweni, uluhlu lwezinto zobuhle, kodwa wabonakalisa ubuntu. " (Isidumbu esiguqukileyo)
Waphoxeka kukungcatshwa ngumyeni wakhe kunye neqabane lakhe, engenabantwana kwaye kude naseMadrid, isixeko awayehlala kuso iminyaka engamashumi amane yokuqala yobomi bakhe, Ulwa nesizungu nomsebenzi, abahlobo abatsha abazenzele unxweme lwaseCantabrian, kunye nolwalamano olungathandekiyo ngokwesondo.
Umhlobo wakhe uJulia ngumntu amthembileyo kwaye umgcina ehamba nemicimbi yakhe yothando. Inkqubo ye- Isithende se-Achilles NguMariana de Marco amadoda.
Uthatha Iinoveli zenkulungwane ye-XNUMX, yiva umculo: ilitye kunye neklasikhi, ukutshaya nokusela iwhiskey enomkhenkce.
Ngelixa kufakelo lokugqibela lolu ngcelele, Umbulali Wentliziyo, UMariana de Marco ugcina a Ukuthandana kwabantu besini esinye kunye nomhlobo wakhe uJulia, evumile ukuba ngungqingili, ngaxeshanye Qhubeka uhamba ulwalamano lwabo kunye neqabane lakho ngexesha lokuhanjiswa kokugqibela, Intatheli uJavier Goitia, esishiya sinamathandabuzo ngekamva lejaji, e Okanye iSitalato ngonaphakade, iGoitia iba omnye wabalinganiswa abaphambili. Ukuhlala eRitzs Mariana noJavier Goitia kugcina ukomelela, ubudlelwane obunokhuphiswano kunye nothando ngokwasemzimbeni, ngokomoya nangokwasemsebenzini.
O Calle Para Siempre: Ukuhanjiswa kwethoba kothotho lweMariana de Marco nguJose María Guelbenzu.
Uthotho lukaMarco lukaMariana:
Ukuhanjiswa kokuqala yalo mantyi ukrelekrele ukrelekrele, unzima kwaye unencasa embi namadoda, ufike kwiivenkile zeencwadi ku 2001nge Musa ukumhlukumeza umbulali, setha kwi Inani elincinci laseCantabrian. Emva kwe- isibini sokudluliselwa Kumanani alandelelanayo, uMariana de Marco ungena kwisitolimende sesine, isikwere esikwi Inkundla yaseGijon, apho ikhatshwa nguMhloli Quintero kunye nomhlobo wakhe othembekileyo uJulia, usombulula amanye amatyala ama-5.
Kule fakelo yakutshanje, Okanye iSitalato ngonaphakade, UMariana de Marco Buyela eMadrid ukuze uhlale nanjengoko evakalisa ngokwakhe, eneempawu ezigqwesileyo zokufuna lwela indawo yamandla kwinkqubo yezomthetho.
Kude kube nini uMariana de Marco?
Ukuhanjiswa ezilishumi Izithembiso zikaGuelbenzu ngalo mantyi uvavanyayo.
Ndingathanda ukuza nenombolo njengoluhlobo Sibonisa imbeko kolu luhlu lubhalwe ngababhali uPer Wählo noMaj Sjowall ngoo-XNUMX. Ndibajonga njengabenzi benoveli yaseYurophu yangoku, "utshilo uGuelbenzu kwiminyaka eyadlulayo xa ebuzwa malunga nayo.
UGuelbenzu umisela ukusinda kweprozi yakhe kuloo mntu uphambili kuye, uMariana de Marco.
«Ndibhala inoveli yomcuphi kuba ndinomdla kuMariana de Marco. Xa izinto ezinomdla omkhulu ziyeke ukwenzeka kuye, ngalo mzuzu uthotho luyakuphela »
Umbhali: Jose María Guelbenzu
UJose Maria Guelbenzu (IMadrid, 1944) Waqala umsebenzi wakhe wokubhala kwi iimagazini Iimpawu (apho asebenzisana khona uphononongo lwefilimu) kunye Iincwadana zeHispano-American (apho atyhile khona eyakhe imibongo).
Ngo-1964 wajoyina iphephancwadi elalisandula ukusekwa Iincwadana zokubhalela Incoko. Yayenye ye Abalawuli be-co Umfanekiso weKini-yeKlabhu Ukusuka eMadrid Wayesebenzisana kumaphephandaba esizwe ngelo xesha nakwiimagazini ezahlukeneyo zoncwadi.
Ngo-1970 wajoyina Umshicileli weTaurus kwaye ngo-1977 wacinga ukuba ulwalathiso lomhleli Ngokufanayo. Ngo-1982 wathatha indawo umkhombandlela wokubhala wendlu yokupapasha iAlfaguara. Wazibamba zombini ezi zikhundla kwade kwango-1988, xa wayeshiya izindlu ezimbini zokupapasha ukuze azinikezele kuphela kuhlobo loncwadi.
Okwangoku es negalelo rhoqo amacandelo e Uluvo kunye neNkcubeko de El País kwaye usebenzise ii Ukugxekwa koncwadi ngeveki kwisongezelelo sencwadi IBhabheli, ikwiphephandaba El País, Iphephandaba awayebhale kulo ukusukela oko yasekwayo.
Ube lijaji lamabhaso ohlukeneyo oncwadi kunye neminyaka embalwa Wongamela ijaji kwiBhaso lencwadi leCafé Gijon.
Wayengumongameli kunye nonjingalwazi weSikolo seeleta eMadrid Kwiminyaka emihlanu yokuqala yequmrhu.
Nangona incwadi yakhe yokuqala epapashiweyo yingqokelela yemibongo, uJose María Guelbenzu uye wakhulisa umsebenzi wakhe wobuchule ikakhulu njengo umbhali wenoveli kwimigca emibini eyahlukeneyo: enye apho athetha khona ngokubonisa, ukugxeka kunye nefilosofi yentlalo kunye noluhlu lwamapolisa lukaMariana de Marco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » O Calle para Siempre: Ufakelo lwesithoba kuthotho lweMariana de Marco lubetha iivenkile ezithengisa iincwadi.
Iincwadi ezi-4 ezihlekisayo ezikhoyo neziza kuza. UGauld, uGuarnido, uRoca kunye noBligiardo
Amabali abazalwana bakaGrimm. Isikhumbuzo sikaWilhelm Grimm